အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ် ဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင်လ ၅ရက်နေ့ ၂၁:၀၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်. ထိုထုတ်ပြန်ချက်ကို အခြေအနေစောင့်ကြည့်ပြီး FOMC အဖွဲ့ဝင်အကြီးအကဲတွေအနေနှင့် အတိုးနှုန်းတင်ရန် ဆန္ဒရှိ၊ မရှိဆိုတာကို ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်. ထို့အပြင် အမေရိကန် စီးပွားရေးအခြေအနေအပေါ် ဗဟိုဘဏ်၏ အမြင်ကိုပါ သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်. ထိုဆွေးနွေးပွဲသည် ဈေးကွက်အပေါ် သက်ရောက်မှုပြင်းသည့် အတွက် အမေရိကန်စီးပွားရေးအပေါ် ဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲများ၏ အမြင်မှာ အနှုတ်သဘောဆောင်လျှင် အမေရိကန်ငွေကြေး USDအပေါ် ဖိအားသက်ရောက်စေမှာ ဖြစ်ပါသည်.